I-10600nm i-CO2 ye-Laser Factory - i-China i-10600nm i-CO2 ye-LASER abavelisi, abaxhasi
I-10600nm ephathekayo yonyango okanye i-co2 yezilwanyana ye-laser yeZ15A
Unyango lwe-CO2 laser kusetyenziswa uphawu lwe-co2 laser, eline-10600nm, imveliso ye-laser engabonakaliyo ye-infrared laser ibonakaliswa kukuxinana kwamandla amancinci. Imveliso yeLaser beam sisipili esigxile kuyo, indawo ekujolise kuyo izicwili ekujolise kuzo zinokuvelisa igesi ephezulu yokushisa, inokusetyenziselwa ukusika, ukutshisa.
Inkqubo ye-CO2 ye-laser esisigxina yokususa i-tag Z25A
iiseli zombala ngaphandle kokwenza naliphi na ithambo elijikelezileyo, elinciphisa ixesha lokuphilisa kwaye likhuthaze inkqubo yendalo yolusu yokudala izicwili ezitsha nezisempilweni.
Ukususwa kobuninzi be-Co2 Laser Skin Treatment Z15C
Unyango lwe-pulse yinkqubo ekhuselekileyo, engafunekiyo ekuvumela ukuba uphinde ufumane ulusu olutsha, olusempilweni ngobuhle bakho.
I-co2 ephathekayo yelaser eqhekeza ukususwa kwe-Scar Z15B
ukubetha kuyinxalenye yokuba inyanga kakhulu iiseli zombala zesidala ngaphandle kokwenza nayiphi na inyama.
40W RF Fractional CO2 Laser Generator Vaginal Tensioning Scar Ukususwa kwe-ER700C
I-30W yeLaser yeLaser yeFactional itywinwe ngaphandle kwe-CO2 Laser ER700B
unyango oluqhekezayo oluvelisa amawaka eekholamu ezinzulu, ezincinci kulusu lwakho, ezibizwa ngokuba yimimandla yonyango encinci. ukubetha kuyinxalenye yokuba inyanga kakhulu iiseli zombala zesidala ngaphandle kokwenza nayiphi na inyama.
40w Co2 Laser Fractional Laser Commercial lobufazi Ukuqinisa ER800A
Umatshini uneenkqubo ezi-3: I-CO2 eqhekekileyo, i-VRL kunye ne-CO2, inokuzanelisa zonke iimfuno, utyalo-mali oluhle kakhulu unyango olukhuselekileyo.
10600nm Fractional co2 Laser Skin Ukubuyisela ER600B
I-10600nm Fractional CO2 Laser yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kwi-cosmetic dermatology, Iyasebenza kwi-Acne Scars, i-pigmentation, i-Freckles, imigca emihle kunye nonyango lokunciphisa imibimbi.